WINDOWS ကိုပေါ် MOUSE ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို7- WINDOWS ကို - 2019
Windows7ကိုပေါ် mouse ကို၏ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းခြင်း
တခါတရံ Windows 10 ကိုအသုံးပြုသူများအမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ စနစ်ပျက်ကျ - အခြားသူများစဉ်အချို့ကိုအန္တရာယ်ရှိဖိုင်တွေသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့အသုံးပြုသူစစ်ဆင်ရေး၏အရေးယူမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ သို့သျောလညျး, အသေးစားနှင့်မဟာအလွန်အမှားအများဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာရိုးရှင်းစွာတညျ့ 10 အစီအစဉ်ကို FixWin ဤဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်ကူညီနေကြပါတယ်။
အထွေထွေ tools များ
ချက်ချင်းပစ်လွှတ်ပြီးနောက် FixWin 10 အသုံးပြုသူ tab ကိုရရှိသွားတဲ့ «ကွိုဆို»အဘယ်မှာရှိသည်သူ၏ကွန်ပျူတာ (OS ဗားရှင်း, RAM ကို၎င်း၏စွမ်းရည်, installed processor နှင့်ငွေပမာဏ) ၏အခြေခံလက္ခဏာများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုငျသညျ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Store မှာ, စနစ်ပုံရိပ်၏ပွနျလညျထူထောငျကနေ restore point တစ်ခုဖန်တီးစနစ်ဖိုင်တွေကိုသမာဓိရှိစစ်ဆေး, Re-ဒဏ်ရာရ applications များ - အောက်ထပ်သင်တို့ကိုလည်းလုပျထုံးလုပျနညျးအမျိုးမျိုးကို run ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းလေးခလုတ်ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ပိုပြီးကျဉ်းမြောင်းစွာ tools တွေနဲ့အာရုံစူးစိုက်ရှိပါတယ်။
ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို (Explorer ကို)
ဒုတိယ tab မှာ, tools များအတွက်စပယ်ယာ၏ပွနျလညျထူထောငျအလုပ်အပေါ်တည်ရှိသည်။ သူတို့တစ်ဦးစီခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သီးခြားစီ run နေသည် « Fix »။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်မရရှိနိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများစာရင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
desktop ပေါ်မှာမှပျောက်ဆုံး icon များ၏ပြန်လည်စတင်;
ဆေးဝါး "လျှောက်လွှာမှားယွင်းနေသည် Wermgr.exe သို့မဟုတ် WerFault.exe »။ ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် registry ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကကူးစက်လာသောအခါမျက်နှာပြင်သက်ဆိုင်ရာအမှားပြသတဲ့အခါဒီအသုံးဝင်သည်,
setting များကို Restore "Explorer ကို" တွင် "Control Panel ထဲက" သင်သည်သူတို့၏စီမံအုပ်ချုပ်သူကို disable သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားရန်လျှင်,
အိုင်ကွန် updated မဟုတ်အခါတောင်းဆုံးမခြင်း;
startup ပြုပြင်ခြင်း "Explorer ကို" Windows ကိုစတင်သည်သောအခါ,
ဆုံးမပဲ့ပြင် thumbnail ကိုခင်းကျင်းပြသ;
optical discs တွေကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများဖြေရှင်းရေး windose သို့မဟုတ်အခြားအစီအစဉ်များ;
အမှားပြင်ချက် "အတန်းအစားမှတ်ပုံတင်မရ" တွင် "Explorer ကို" သို့မဟုတ် Internet Explorer ကို;
button ကို Restore "ဝှက်ထားသောဖိုင်တွဲများ, ဖိုင်တွေနဲ့ disk တွေပြရန်" ရွေးချယ်မှုများအတွက် "Explorer ကို".
သငျသညျအသီးအသီးကို item များ၏ရှေ့မှောက်၌တည်ရှိသောသောမေးခွန်းတစ်ခုအမှတ်အသား၏ပုံစံအတွက် button ကို click ပါက fix ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ပြဿနာနှင့်ညွှန်ကြားချက်များအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကြည့်ပါ။ သည်, ထိုအစီအစဉ်ကိုကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လုပ်မယ့်ကြောင်းပြသထားတယ်။
အင်တာနက်ကို & ဆက်သွယ်မှု (ဆက်သွယ်မှု)
ဒုတိယ tab ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်နဲ့ browser နှင့်ဆက်စပ်သောအမှားပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ tools တွေမပါကွဲပြားခြားနားသောအပြေး, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ရပ်များထွက်သယ်ဆောင်:
က Internet Explorer အတွက်ယွမ်ကို အသုံးပြု. ဆုံးမပဲ့ပြင်ပျင်းရိ Context Menu က;
TCP / IP protocol ၏ပုံမှန်လည်ပတ်၏ပြန်လည်စတင်;
သက်ဆိုင်ရာ cache ကိုရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် DNS ကို resolution ကိုပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကို;
Windows ကို updates များကိုများ၏စာရွက်အရှည်သမိုင်းပျော်စေ;
Firewall ကို system configuration က Reset;
default settings ကိုမှ Internet Explorer ကို Reset;
က Internet Explorer အတွက် browsing စဉ်အမျိုးမျိုးသော bug တွေ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်;
တခါမှာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဖိုင်များကို upload လုပ်ဖို့က Internet Explorer ဆက်သွယ်မှုအတွက် optimization;
IE ကိုအတွက်ပျောက်ဆုံးနေ setting များကို menus တွေနှင့်စကားကွက် Restoring;
TCP / IP configuration များအတွက်တာဝန်ရှိသည့် Winsock သတ်မှတ်ချက်, Reset ။
ခေါင်းစဉ်အပိုင်းမှာတော့ «က Windows 10 " အဲဒီမှာ operating system ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှမတူကွဲပြားသော tools များဖြစ်ကြပေမယ့်တရားဝင်စတိုးဆိုင် windose မှမြှုပ်နှံမှာအများဆုံးအပိုင်းတစ်ခု။
အဆိုပါပစ်လွှတ်သို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောအမှားများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လျှောက်လွှာ settings ကို Reset;
ရပ်နားခြင်း menu ကို fix "Start";
သငျသညျကို Windows 10 upgrade ပြီးနောက် wireless network ကိုဖြေရှင်းရာမှာ;
တင်အစီအစဉ်များနှင့်အတူ Store ကို cache ကိုအခက်အခဲများပျော်စေ;
အမှားကုဒ်တွေနဲ့ဖြေရှင်းချက် 0x9024001e သင်က Windows Store မှ app ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ,
re-မှတ်ပုံတင်ရေး၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူမှားယွင်းမှုများအတွက်အားလုံး applications များ၏။
System Tools (System Tools)
windose 10 ၌သင်တို့ကိုလျင်မြန်စွာအချို့သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း built-in function တွေကိုများစွာပါရှိသည်။ ဤကိရိယာများလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် FixWin 10 အစဉ်အဆက်ထက်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
နာလန်ထူ "Task Manager ကို" စီမံခန့်ခွဲသူကို disable ပြီးနောက်;
activation "Prompt ကိုဆင့်ဆို" စီမံခန့်ခွဲသူကို disable ပြီးနောက်;
တစ်ဦး registry ကိုအယ်ဒီတာတွေနဲ့အတူတူပြင်ဆင်ချက်ထုတ်တင်ဆောင်လာသော;
အဆိုပါ MMC snap-ins နှင့်အုပ်စုတစ်စုမူဝါဒများပုံမှန်;
default settings ကိုမှ Windows တွင်ရှာဖွေရေး Reset;
ဒီ tool ကိုသက်ဝင် "System Restore"ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူကပိတ်ထားပြီးလျှင်၎င်း,
ကိစ္စတွေပြန် "Device Manager";
Windows Defender Restore နှင့်၎င်း၏ setting များကို reset;
Antivirus ကို install လုပ်ထား windose Sensing Center က activation နှင့်လုံခြုံရေးအားဖြင့်အမှားများကိုဖျက်သိမ်းရေး,
စံမှကို Windows လုံခြုံရေး settings ကို Reset ။
အပိုင်းများတွင်ဖြစ်ခြင်း « System Tools »သင်ဒီမှာလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယ tab ကိုလည်းရှိကွောငျးကိုသတိပြုမိကြပေမည် «အဆင့်မြင့် System ကိုပြန်ကြားရေး»။ ဒါဟာ CPU နဲ့ RAM နှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက် display ကိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒီမှာ data အားလုံးကိုစုဆောင်းမထားဘူး, ဒါပေမယ့်အများကြီးအသုံးပြုသူများအဘို့ဤအလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။
အပိုင်းမှာတော့ « troubleshooting » ဟာ operating system ထဲမှာ default အနေဖြင့် installed သမျှသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများပြန်ဆို။ ရရှိနိုင်သောခလုတ်တစ်ခုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်း, သင်ရိုးရှင်းစွာစံရောဂါရှာဖွေရေးကို run ။ သို့သော်အောက်ခြေမှာသောအပိုဆောင်းနည်းလမ်းများအာရုံစိုက်။ သငျသညျအပလီကေးနှင့်အတူဆက်စပ်ပြဿနာများပြင်ပေးဖို့ကို download ရရှိနိုင်နည်းလမ်းများခွဲခြား "မေးလ်" သို့မဟုတ် "ပြက္ခဒိန်"အခြား application များ၏ setting ၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူနှင့်တိကျသောပရင်တာအမှားများနှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးအပိုင်း OS ကို၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောအပိုဆောင်းပြုပြင်မှုများပါရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလိုင်းထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်:
၎င်း၏ setting များကိုမရှိခြင်းအတွက် hibernation mode ကိုဖွင့်,
မှတ်စုကိုမဖျက်ပစ်တဲ့အခါမှာပေးတဲ့ dialog box ကို Restore;
Aero mode ကိုဒီဘာဂင်;
Fix နှင့်ပျက်စီးသွားသော desktop ပေါ်က icon တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်;
Taskbar ပေါ်တွင်ပြသမှုစာရင်းနှင့်အတူပြဿနာများ troubleshoot;
ဒီအမှားပြင်ပေးဖို့ "ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အိမ်ရှင်သည် Windows script ကိုမှ Access ကိုပိတ်ထား";
Windows 10 ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်စာရွက်စာတမ်းစာဖတ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ် Restoring;
ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားများ 0x8004230c သင်တစ်ဦးပုံရိပ်စာဖတ်ခြင်း restore ရန်ကြိုးစားသောအခါ,
အမှားပြင်ချက် "တစ်ခုကပြည်တွင်းရေး application ကိုအမှား" Windows Media Player Classic ၌တည်၏။
အများဆုံးပြုပြင်မှုများ၏အင်အားသုံးသို့ entry ကိုများအတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်ချက်ချင်းကိုဖန်ဆင်းလတံ့သောကွန်ပျူတာပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့တောင်းမည်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် « Fix ».
Windows တွင်သာ 10 နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
FixWin 10 သာအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည် - နီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲများအတွက်အသုံးပြုမှုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာလက်ရှိ tools တွေကိုဘုံပြဿနာများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခွင့်ပြုသည်။
FixWin 10 အခမဲ့ Download
က Internet Explorer ။ ဘရောက်ဇာကို reinstall နှင့် restore Windows ကိုပြုပြင်ခြင်း က Internet Explorer Settings ကို အဘယ်ကြောင့်အလုပ်က Internet Explorer browser ကိုရပ်တန့်
FixWin 10 - က Windows 10 မှာအမျိုးမျိုးသောစနစ်ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။
ရေးသားသူ: Anand Khanse
Size: 1.0 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Not connected No Connection Are Available All Windows no connected (စက်တင်ဘာလ 2019).